Ahoana no ahafahan'ny fanaraha-maso SEO tsara manampy ny orinasa?
Ny fanaraha-maso fanodinana fikarohana dia singa ilaina amin'ny SEO rehetra. Raha resaka marketing izany, ny fanaraha-maso SEO dia fitaovana tonga lafatra mba hanombanana ny mombamomba ny toetr'andro sy ny fahatsaram-panahinao. Ny fanaraha-maso ny SEO dia manome fanazavana amin'ny antsipirihany momba ny toerana misy anao amin'izao fotoana izao, izay manampy amin'ny fampivoarana ny ezaka SEO anao - grain drying storage bins.
Raha mbola tsy nanao ny fanaraha-maso SEO an'ny tranokalanao ianao, dia farito haingana araka izay azo atao. Ireo tompon'ny tranonkala izay matoky ny raharaham-barotra ataon'izy ireo, dia manao tsirambina indray mandeha isaky ny telovolana.
SEO Audit: Inona izany ary ahoana no fomba itantanana azy?
Ny fanaraha-maso ny SEO dia ny fanovana sy ny fanamafisana ny fanatrehan'ny tranonkala misy anao. Amin'ny ankapobeny, izy io dia mandrakotra ny andian-tsokosoko indrindra amin'ireo tranonkala be mpitsikera indrindra, anisan'izany ny:
Fanombanana ny valin'ny fanindronana;
fifandraisana ara-media sosialy;
olana mifandraika amin'ny votoaty iombonana.
Ankoatra ny fanampiana ny mamantatra ireo olana, ny kaonty SEO ihany koa dia manampy amin'ny fanatanterahana ny fikajiana ary koa ny fandikana ny angon-tseraseran'ny orinasa finday maro.
SEO Audit: Nahoana no Ilainao izany?
Raha toa ianao ka mihazakazaka raharahambarotra, dia tokony ho fantatrao ny fomba hamantarana ny hery sy ny fahalemen'ny tranonkala. Ny fanaraha-maso SEO dia safidy tonga lafatra ho an'ireo izay miezaka hahatakatra ny fomba hamantarana ireo mety ho azon'izy ireo ao amin'ny fikarohana Google.
Angamba azonao fa ny tranonkalanao dia ny fivarotana ny fivarotana sy ny ezaka amidy. Izy io no toerana voalohany iantsoana mpanjifa amin'ny fampahalalana momba ny tolotr'asa na ny vokatrao. Io no toerana hamenoany ilay taratasy ary hamita ny fividianana.
Tsarovy, raha tsy manatsara ny fisian-tsika amin'ny Internet ianao mba hahita sy hanehoana ny tranonkalanao, dia saika very maina ny ezaka ataonao. Amin'ny teny tsotra, raha tsy mahita ny votoatinao ny mpampiasa dia tsy afaka ny hiresaka aminao izy ireo.
Ireto misy tombony telo tsara indrindra amin'ny fanaraha-maso ny SEO:
Fanamafisana ny marika: Manome fiaraha-miasa amin'ny tranonkala, ary fahefana.
Manitatra ny ezaka ara-barotra: Manampy ny fijerena ireo lavaka ao amin'ny ezak'akanjonao ara-marketing. Ny mahafantatra ny toetry ny fahasalamana amin'izao fotoana izao sy ny olana izay manelingelina ny fisehoana an-tserasera amin'ny Internet dia mahasoa ho an'ny orinasa rehetra.
Mampitombo ny fahefan'ny sehatry ny vohikala: Manampy ireo orinasa hianatra momba ny fifaninanana sy hamolavola drafitra hanatsarana ny fivoaran'ny fivoarana, ny varotra ary ny fitarihana.
Ny fanaraha-maso SEO dia fomba iray manokana hanatsarana ny tranokalanao ho an'ny motera lehibe indrindra. Izy io koa dia vahaolana tsara indrindra hampitombo ny habetsan'ny fifamoivoizana an-tserasera amin'ny tranokalanao. Ny fanaraha-maso SEO dia manampy ireo tompona fandraharahana hahazo fahatakarana tsara kokoa ireo tranga mety hisy fiantraikany amin'ny fizotry ny tranokalan-tserasera sy hahitana raha afaka mandika ny pejy rehetra amin'ny tranonkala Google. Tadidio fa mandany fotoana sy faharetana ny fanaraha-maso SEO mahomby. Na dia izany aza, ny tatitra momba ny vokatra ankapobeny amin'ny ezak'ireo e-mailaka niomerika azonao amin'ny farany dia mety ho ny zavatra tokony ilainao amin'ny fanatontosanao ny dingana manaraka.